दुध बिक्रीबाट फलेवासको एकै गाउँमा करोडौं भित्रियो, पशुपालन प्रति कृषकहरू उत्साहित ! – ebaglung.com
२०७६ कार्तिक १, शुक्रबार १८:२१	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
लक्ष्मण बिसि, फलेवास पर्वत २०७६ कात्तिक १ । पर्वत फलेवासको एक गाउँका किसानहरूले दुध बिक्री गरेर नै करोडौं रुपैया आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । पर्वतको फलेवास नगरपालिका ६ देविस्थानका किसानहरूले डेरी मार्फत दुध बेचेर करोडौं रुपैया गाउँ भित्र्याउन सफल भएका हुन् ।
पशुजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापनको लागि गाउँमा कृषकहरुले कृष्ण गण्डकी उन्नत गाइ तथा भैंसी पालन सहकारी नै संचालन गरि उत्पादित दुधको बजारीकरण गर्दै आएका छन् ।
सुरुमा स्थानिय १५ जना व्यवसायिक कृषकहरुको सक्रियतामा समूह गठन गरि कृषि तथा पशुपालनबाट कृषकहरुको जिवनस्तर उकास्ने उदेश्यले फलेवास नगरपालिकाको १० लाख अनुदानमा गत बर्ष देखि उक्त संस्था संचालन गरिएको कृष्ण गण्डकी उन्नत गाई भैंसी पालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रुद्र प्रसाद भुसालले बताए । संस्था गत भदौ देखि बिधिवत रुपमा दर्ता भएको उनले बताए । २ हजार लिटर दुध राख्न सकिने चिलिम भ्याट खरिद गरि नगरका ११ वटै वार्डका किसानले उत्पादन गरेको दुध जम्मा गरि बिक्री वितरण गरि किसानको आयस्रोत बढाउने उदेश्यले उक्त सहकारी स्थापना गरिएको भुसालले बताए । अहिले वार्ड नं. ४ मुडिकुवा र वार्ड नं. ६ देविस्थानका ७२ जना कृषकहरुले दुध डेरीमा ल्याउने गरेको र आगामी दिनहहरुमा अन्य वार्डका किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध पनि संकलन गरि वितरण गरिने योजना बनाएको उनले बताए ।
१ जना किसनले दैनिक ५ देखि ६० लिटर दुध डेरीमा ल्याउने गरेको र हरेक दिन ६ सय देखि ७ सय लिटर सम्म दुध पोखरा लभकुश डेरीमा पठाउदै आएको उनले बताए ।
गएको एक बर्षमा दुध बिक्रीबाट सबै खर्च कटाएर १ करोड भन्दा बढी रकम सहकारीमा भित्रिएको र किसानहरुलाई दुधको हिसाब गरेर उक्त रकम वितरण गरिएको अध्यक्ष भुसालले बताए । एक कृषकले मासिक १० हजार देखि ६० हजार सम्म आम्दानी गर्दै आएको उनले बताए ।
शुद्ध दुधको प्रतिलिटर ४८ रुपयाका दरले किसानलाई प्रदान गरिएको र दुध ढुवानीमा मासिक १ लाख २० हजार खर्च भएको उनले बताए । कृषि र पशुपालनमा कृषकहरुलाई व्यवसायी र आत्मनिर्भर गराउदै गाउँका युवायुवतीको बिदेश पलायन रोक्नको लागि हरेक घरमा ५ टनेलमा तरकारी खेती र २ वटा गाई पालेर दुध उत्पादन गरि आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने भुसालको भनाई छ ।
बसाइँसराइ र बिदेश पलायन हुने युवाहरूलाई रोक्दै गाउँमै कृषि तथा पशुपालन गरि जिबिकोपार्जन गराउने उदेश्यले दुध डेरि संचालन गरिएको कृषक तथा उक्त सहकारी संस्थाका सचिव बुद्धिराज गौडेलले बताए । यस ठाउँमा कृषि तथा पशुपालनमा राम्रो संभावना भएको बताउदै कृषकहरु व्यवसायी बन्दै आय आर्जनमा जोड दिएर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने गौडेलले बताए ।बास्तबिक किसानहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि तिनै तहको सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
व्यवसायीक रुपमा पशु पालन गर्दै दैनिक ६० लिटर भन्दा बढी दुध बिक्री गर्दै आएको देविस्थानका स्थानीय अगुवा कृषक माधव पौडेलले बताए । गाई भैंसी फार्म नै संचालन गरेर उन्नत जातको ८ वटा गाई र भैंसी साथै उन्नत जातको रागो गरि १३ वटा पशु पालेर मनग्ये आम्दानी गरेको उनले बताए । उनका दुई छोरा रोजगारका लागि साउदी कतार गएको तर राम्रो आम्दानी गर्न नसकेपछि अहिले घर फर्केर पशुपालनमा लागेको पौडेलले बताए । उनले भने “ म आफ्नो पेसा प्रति सन्तुष्ट छु,आम्दानी पनि राम्रो भएको छ, मेहनत गरेमा परिश्रमको फल पनि पाइदो रैछ, दुध बिक्रीबाट ढुवानी खर्च कटाएर मासिक ६० हजार भन्दा बढी आम्दानी भएको छ ” । गत बर्ष नगरपालिकाले पनि ४० हजार अनुदान दिएको पौडेलले बताए । मिहेनत र लगनशीलता भएमा आफ्नै गाउँठाउँमा मनग्ये आम्दानी गर्न सकिने अर्का कृषक महेश घिमिरेले बताए । दुध ढुवानीको चालक समेत रहेका घिमिरेले भने “तराई तिर गएर केही गर्छु भनेर चितवन गएको थिए तर त्यहाँ भन्दा फलेवासमा फाइदा हुने देखे, कृषि संभावना पनि धेरै छ, त्यसैले यहि पशुपालन गरेको छु” ।
खाडी मुलुकमा रगत पसिनासंग ३०÷३५ हजारमा चिन्ता बुझाउनु भन्दा यहि फाइदा हुने गरेको ९ बर्ष बिदेश बसेर आएका कृषक डोलराज भुसालले बताए । अहिले दुध ढुवानीमा बढी खर्च भएको र दूध उत्पादक कृषकहरु मारमा परेको बताउदै ढुवानीमा सहयोग गरिदिन फलेवास नगरपालिकासंग आग्रह गरे । नगरपालिकाले ढुवानीको मात्र व्यवस्था गरिदिए अरु काम कृषक आफैले गर्ने उनको भनाइ छ ।
अधिकांश कृषकहरूले दुध ढुवानीमा बढी खर्च भएको भन्दै ढुवानीको व्यवस्थापन भएमा अझ बढी आम्दानी गर्न सकिने बताएका छन ।
कृषकहरुले दुध ढुवानीको लागि आफ्नै लगानीमा जिप किनेका छन् । १५ जना कृषकहरुमध्ये ६ जना कृषकले १÷१ एक लाख र अरुले ५०÷५० हजार र बाकी अर्का कृषक महेश घिमिरेको लगानीमा करिब २७ लाखमा जीप किनेको उनको भनाई छ । व्यवसायिक रुपमा कृषि तथा पशुपालनमा लागेका कृषकहरुलाई नगरपालिकाले भरपुर सहयोग गर्ने नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले बताए । कृषि, पर्यटन र रोजगार, समृद्ध फलेवासको आधर भन्ने मुल नारासंगै नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरेको शर्माले बताए । कृषकहरुले उत्पादन गरेको दुध ढुवानीका लागि अहिले प्रतिफलका आधारमा ढुवानीमा सहयोग गरेको र आगामी दिनहरुमा पनि नगरपालिकाले विशेष सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अहिले किसानहरुले आफ्नै लगानीमा उन्नत जातका गाईहरु पालेका छन । विदेश गएर हन्डर ठक्कर खाएर फर्किएका गाउँका युवाहरू अहिले गाउँमै कृषि तथा पशुपालनमा रमाएका छन् । गाउँघरमा दुध डेरीमार्फत दुध बिक्री गर्न पाउदा किसानहरु खुसी भएका छन् ।